Angikhathazekile ngekusasa lami kuSundowns: Neeskens | IOL Isolezwe
Angikhathazekile ngekusasa lami kuSundowns: Neeskens
Isolezwe / 28 May 2012, 11:06am /
MINENHLE MKHIZE noMALIBONGWE MDLETSHE
UCASHA ngesithupha umqeqeshi weMamelodi Sundowns uJohan Neeskens (osesithombeni) ohluleke wancama ukuqeda indlala yezicoco kuleli qembu elibhaxabulwe yiSuperSport United kowamanqamu eNedbank Cup.
Abafana Bes’tayela bathelwe othulini yiSuperSport United ngo 2-0 wamagoli kaThabo September noKermit Erasmus emdlalweni obuse-Orlando Stadium, eGoli ngempelasonto.
ISundowns, enabadlali abasezingeni eliphezulu, sekuphele amasizini amane elandelana ihlulwa wukunqoba izicoco kwazise igcine ngeNedbank ngo-2008.
“Angikhathazekile ngekusasa lami kuSundowns ngoba umuntu ozokhipha isinqumo ngami nguMengameli weqembu nami. Ngesikhathi ngifika lapha ngilimise ngesihloko elokuthi ngifuna sidlale ibhola elihle okuyinto esiyenzile kule sizini. Bekuyisizini yami yokuqala okusho ukuthi abadlali bekusamele bajwayele isitayela sami. Ngakolunye uhlangothi nami bengifuna ukuqonda indlela abadlala ngayo. Eminyakeni emine iSundowns ihlulwa yizicoco ibingakaze idlale emdlalweni wamanqamu kodwa ngaphansi kwami ikwazile yize sehlulwe yiSuperSport,” kusho uNeeskens.
ISundowns isizakhele udumo ngokungancengi kubaqeqeshi abahlulwa wukuletha impumelelo eChloorkop.
Abanye abaqeqeshi abahluleke wukuletha intokozo kuMotsepe ngu-Henri Michel, Ian Gorowa, Hristo Stoichkov no-Anthony Habbas.
UNeeskens uthe akazimisele ukucabanga ngekusasa ngoba usaya eholidini.
“Ngisaya eholidini eSwitzerland izinsuku ezinhlanu, eHolland nasePortugal bese ngiyabuya-ke ngize eYobo, (ehleka) iYobo, iJoburg. Abantu bathanda ukubuka izinto ngendlela yabo kodwa thina sisazodlala ibhola elihle ngesizini ezayo,” kusho lo mqeqeshi odabuka eHolland.
Ukushweba kweDowns kunikeze iSuperSport United ithuba lokubuyela emidlalweni yeCaf njengoba izodlala kuConfederations Cup ngesizini ezayo.
UNeeskens uzithethelele nangezinguquko azenzile ekhipha u-Elias Pelembe wafaka uKatlego Mphela obengasalazi ijezi.
Uphinde wacacisa nangesizathu sakhe sokugcina uSurprise Moriri ngemuva kokuthi uClayton Daniels ethole ikhadi elibomvu.
“Anginanxa namuntu ngisho noPelembe kodwa ibhola liyaphoqa ukuthi senze izinqumo. Ngicabangile ukushintsha ngemuva kwekhadi elibomvu likaDaniels kodwa ngabuya ngayeka ngoba bekungawenzi umqondo ukufaka umdlali wasemuva,” kuqhuba uNeeskens.